SomaliaReport: Puntland oo Adkaysay Amaanka Magaalooyinka
Ciidamada amaanka ee Puntland ayaa bilaabay hawlgallo sare loogu qaadayo amaanka guud isla markaana ciidamadooda meelo walba dhigay ka dib markii ay sii kordheen khaarajinta iyo weerarada lala beegsaday magaalada dekedda leh ee Boosaaso iyo Gaalkacyo.
Madaxa guud ee booliska gobolka Bari, mudane Siciid Jaamac ayaa sheegay inay ciidanka amaanku baadhis aqal walba lagu sameeyey ka dib ay gacanta ku dhigeen dad gaadhaya 10 qofood . qabqabshada dadkan ayaa timid ka dib markii ay xoogagga amaanku heleen xog tilmaamaysa in weeraro xajmi weyn leh ay soo socdaan.
“Ilo lagu kalsoon yahay ayaa nagu wargaliyey inay dad markii horeba horay loola socday dhaqdhaqaaqyadooda kuna dhuumaalaysanaya magaalooyinka ay qorshaynayaan weeraradan, ciidankeenuna gacan bay ku soo dhigi doonaan cid walba oo looga shakiyo fal danbiyeed.” Jaamac ayaa wargayska Somalia Report sidaa u sheegay.
Amaanka caasimadda gobolka ee Garoowoe ayaa aad loo adkeeyey, waxaana la arkayaa ciidamada amaanka oo meel walba socda intii ka danbaysay dhacdoyinkii Galgala iyo dilkii Boosaaso loogu gaystay ganacsade caan ka ahaa gobolka.
Magaalooyinka Boosaaso iyo Gaalkacyo oo labadaba ay la soo gudboonaadeen dilal qorshaysan iyo bambaanoyin jidka ah ayay saraakiisha nabad-sugiddu ku hawlan yihiin sidii sare loogu qaadi lahaa xasiloonidooda.
Ugu yaraan 10 qofood o looga shakisan yahay inay xidhiidho la leeyihiin ururada ubaysan ee ka dagaalama konfurta Soomaaliya.
Puntland Ayaa Ku Eedaysay Somaliland Inay Taageerto Sheekh Atom.
Maxamed Jaamac Nuur oo ah horjoogaha Puntland ee gobolka la isku haystee Sanaag ayaa sheegay inay xukuumadda Somaliland ay gacan siisay amni daradii dhawaan ka dhacday Puntland sidoo kalena ay taakulayn dhanka Milatariga, tababaridda iyo saadka ahba siiso Sheekh Maxamed Siciid Ata moo ay dablaydiisu dagaal dhanka buuraha Galgala ah kula jireen ismaamulka Puntland.
“Waxaa xaqiiq ah inuu maamulka Soomaaliland taageero ururkan argagixiso ee dadkeena u keenay cabsida, waxaanan u sheegaynaa xukuumadda Somaaliland inay arimeheena faraha kala baxdo” ayuu yidhi Jaamac.
Puntland ayaa ku jirtay nabad iyo xasilooni intii ka danbaysay burburkii dawladdii Soomaaliya ee 1991kii, waxayna 1998 samaysatay is mamaul goboleed madax banaan. Waxaase in dhawayd khalkhal galay nabaddii gobolka ka jirtay ka dib markii dilal iyo khaarajin qorshaysan lala beegsaday madaxda dawladda, culimada iyo ganacsatada.